Saraakiisha Dowladda oo sheegay inay gacanta ku dhigeen gaari Kenya laga soo dhacay. – idalenews.com
Saraakiisha Dowladda oo sheegay inay gacanta ku dhigeen gaari Kenya laga soo dhacay.
Saraakiisha ciidamada Dowladda Soomaaliya ee Gobalka Shabeelaha hoose, ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen gaari noociisa uu yahay mdika waaweyn oo laga soo dhacay dalka Kenya, dhanka Soomaaliyana lala soo aaday.
Sida uu sheegay taliyaha guutada Shanaad ee ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed Col. Xasan Dheere, ciidamada Dowladda ee ku sugan Gobalka Shabeelaha hoose, ayaa waxa ay usuuragashay inay gacanta ku dhigaan gaarigaasi iyo ragii watay.
Wuxuu sheegay in ciidamada Dowladda Soomaaliya ay ku wareejiyeen gaarigii iyo ragii watay intaba, gaar ahaana ay ku wareejiyeen taliska ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo taliyah Hay’adda Nabadsugida.
Taliyaha guutada Shanaad ee ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in gaarigaasi lagu soo wargeliyay in Kenya laga soo dhacay oo Dowladda Soomaaliya ay kusoo wargelisay, sidaasi awgeedna ay galeen baadigoobka gaarigaasi.
Gaariga ayaa hada waxaa gacanta ku haaya taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed, iyadoo aan la ogeyn waxa ay ka yeeli doonaan.
Akhriso magacyadda xildhibaanadda cusub ee baarlamaanka Puntland ee imaanaya 2014-ka + sawiro.